Ahoana no hitsarana ny kalitaon'ny vokatra fitaratra? - fitaratra HHG
Ny fehezan-teny ankapobeny ho an'ny lahatsoratra isan'andro sy indostrialy nalaina avy amin'ny vera ho akora fototra. Ny vokatra fitaratra dia karazana fitaovana matevina mangarahara, izay mamorona rafitra fitohy mitohy rehefa miempo. Mandritra ny dingana mangatsiaka dia mitombo tsikelikely ny viscosity ary mihamafy tsy misy crystallization. Ahoana no hitsarana ny kalitaon'ny vokatra fitaratra?
1. Jereo: ao amin'ny fizotry ny kristaly voajanahary dia misy ireo maloto vokarin'ny tontolo iainana. Raha mijery ny masoandro ianao dia afaka mahita hazavana, eny fa na barika kely sy sakamalaho kely aza. Na izany aza, ny ankabeazan'ny kristaly sandoka dia miempo amin'ny sombin-kibo kristaly sisa tavela sy ny gorodona fitaratra, izay nohosorana sy noloko ary tsy namboarina na dia kitapom-batsy aza.
2. Ny lelan'ny lela: na dia amin'ny andro mafana amin'ny alin'ny vanin-taona mafana aza, ny fiparitahana ny kristaly voajanahary miaraka amin'ny lelanao dia mety hahatsapa ho mangatsiaka sy mangatsiaka. Crystal sandoka, tsy misy fahatsapana mahafinaritra.
3. Jiro: ny kristaly voajanahary dia apetraka mitsangana eny amin'ny hazavana. Na inona na inona zoro jerena azy dia afaka manome maivana mahafinaritra izy io. Tsy mety ny kristaly diso.
4. Hasahita: mafy ny kristaly voajanahary ary tsy hamela trace izany rehefa voarafitra moramora eo amin'ny ravaka amin'ny vato voapaika; raha misy trace, dia kristaly sandoka izany.
Modely fitaratra vita amin'ny volontany
Fitaratra vita amin'ny volontany mihamazava
Eo amin'ny rindrina fitaratra vita amin'ny rindrina
Etch Narrow Reeded Glass soratra
Hevitra amin'ny famolavolana rindrina vita amin'ny rindrina Rainbow
Rivotra vita amin'ny gorodona vy kely ambany
Modely marevaka taratra mazava ho an'ny fanadinana anatiny
Serasera Texture Nashiu